Hafu-Hupenyu hweSocial Media Meltdown | Martech Zone
Pandakataura muSan Diego pa Yemagariro Midhiya Trolls, Dambudziko uye Blunders, chakakoshesa chikamu chekutaura kwese kwaive kutya kusiri madikanwa kunoenderera kuburikidza nevezvenhau pese panotsvedza kambani.
Hafu-yehupenyu yemagariro enhau meltdown inoenderana zvakananga nekukurumidza iyo inotevera kambani inotsvedza.
Uye izvo zviri kuitika maminetsi mashoma ese izvozvi. Mheremhere yese svondo rino ndeye iyo posvo pane Amy's Baking Kambani muScottsdale, Az. Zvino… usati waenda kuverenga kuti post, ingoverenga kuburikidza ichi post usati waenderera mberi.
Ini ndaive nerombo rakaringana (kana kusaita rombo rakaringana) kushanda padekinoroji yeiyo indasitiri yekudyira makore mashoma apfuura. Margins aive akaomarara, mari yevashandi yaive isina musoro, vatengi vaive vasina hunhu, uye nguva nedzvinyiriro pavaresitorendi zvaisapomerwa. Handimbofa ndakavhura yangu inoenderana nezvechikafu kambani…. Ndine shamwari muindasitiri nhasi uye zvirokwazvo iri bhizinesi raunofanira kuda nekuti hapana zvimwe zvakawanda zvakanakira.
Saka, fungidzira iwe wakazotanga kurota kwako uye ukavaka yako bistro. Fungidzira izvozvi zvauri kunetseka kuti uchengetedze resitorendi yako irambe ichifamba uye mukana unouya nekuwana kutariswa neruzhinji kuburikidza neyechokwadi terevhizheni.
Chii chingave chakakanganisika?
Zvakanaka ... sezvo iyo chaiyo terevhizheni inoratidza iri yemamirioni-emadhora bhizinesi mune yega, pane zvishoma. Basa raGordon Ramsey hakusi kutora resitorendi uye kurigadzirisa zvakanaka pakuratidzira kwake. Vataridzi vasvika pakukoshesa chokwadi chekuti iye ane hutsinye uye anozvitutumadza… ndiko kuvaraidzwa. Uye chinangwa chechiratidziro ndechekuona kuti nzvimbo yekudyira inoratidzwa mune yakaipisisa mwenje kuitira kuti VaRamsey vafambe vachiita kunge shasha.
Zvinodanwa Kitchen Nightmares, vanhu. Uye shingai kuti nditi ivo vari kuda izvo zvinoda ... pane vhidhiyo yechikamu pane peji rekumba kwavo.
Uku hakusi kushoropodza kwaVaRamsey. Ini ndinotarisa iyo show uye, paanoipikiri, anoirovera. Asi iye achiri muvaraidzi / chef / muzvinabhizinesi. Varidzi vaifanira kunge vaiziva zvavaipinda. Muchiitiko ichi, iyo showa yanga isina magumo anofadza, Ramsey akabva paresitorendi, uye nyika yakapindura kuburikidza nevezvenhau nekurwisa varidzi Samy naAmy Bouzaglo kuburikidza neFacebook.
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Yekuratidzira kukuru kwekuti chokwadi terevhizheni inoshanda sei, tarisa ichi chinoshamisa Charlie Brooker show:
Uye Amy Boozaglo akapindura (zvino verenga iyo Buzzfeed). Yakanga isiri yakanaka. Muchokwadi, zvakashata zvakashata.
Izvo zvakati, hazvina kukodzera. Amy's Bakery Kambani haisi yeketani yenyika, iri bistro iri kutambura muScottsdale, Arizona. Vanhu vari kurwisa Amy's Bakery Company havana kudyira ipapo, vaisazodyira ipapo, uye vangadai vasina kumboziva kuti yaivepo kusvika pachiitiko cheterevhizheni.
Rega Kutya-Kuwedzera Kutange
Chikamu chinotevera chemagariro enhau kuputsika, hongu, ndezvemagariro enhau pundits kuti vese vavhure mablog avo uye vatange pombi, pombi, kubaya kuti vangadai vakanunura sei kambani iyi kubva mukufa kwakachena uye kuti varidzi vaityisa sei kudzivirira ivo pachavo pasocial media nenzira yavakaita. Chokwadi… havana kuzviita nemazvo. Asi ini handigone kuvapa mhosva. Fungidzira iwe wanga uri mune dzavo shangu, rako basa rehupenyu rakaratidzirwa senge hope dzehusiku paterevhizheni yenyika, uye iwe wakasara nemasoja ema troll paReddit, Yelp neFacebook vachisvibisa kambani yako.
Ndingasvotwawo. Uye ini ndaizopindura futi.
Iyo yekudyira yakabata pfungwa yenyika, vangangoita 50k + vateveri paFacebook, uye - ini handigone kuzvisimbisa izvi - asi ndine chokwadi chekuti imba yekudyira ikozvino yazara. Yavo webhusaiti yakabatikana kuti yaparara. Uye kune vese vanhu vanoita kuchengetedza muScottsdale kuti vadye ku 'nzvimbo iyoyo paKitchen Nightmares', ndine chokwadi chekuti vamwe vavo vanoenda kumba ndokuti ... 'Wow, that was pretty good'!
Uye ndozvinoitawo hafu yeupenyu hweyemagariro midhiya. Kure nekuchema uye kupopota kwemasocial media pundits, iwe uchaona kuti iyo episode yanga isiri chinhu kupfuura fart mumhepo. Chokwadi, yakinhuhwa zvakaipa kwemaminetsi mashoma, asi zvichave zvakanaka munguva pfupi.
Usatende zvemagariro enhau, vanhu. Yese kambani inogona kupora. Uye fungidziro yangu ndeyekuti Amy's Baking Kambani inowedzerera chaizvo.
Tags: kambani yekubheka yaamyindasitiri yekudyiraRestaurants
May 15, 2013 pa 11: 01 PM
Zvinonyadzisa zvepaInternet zvinowanzo fanika kunge bepa - vanodzika nekukurumidza pavanotsva. Asi zvese zviri mumabatiro aunozviita iwe. Amy's Baking Company's-yakazvikonzera epic FAIL yakavimbiswa pavakapindura kune avo vanovatsoropodza nekuzviruramisa-kuzvichenesa, chikoro chechikoro braggadocio, kurwisana, uye - zvakaipisisa - kurwisa kwepamoyo.
VaBouzaglos vakave nemukana wekutora pfungwa dzeveruzhinji kudivi ravo, asi vakazvifuridza. Ivo vangadai vakazviwana pamusoro pavo zvishoma zvishoma ndokupindura kune avo vanovatsoropodza nemusanganiswa wenyasha, kuzvininipisa uye kuzvidzora kunoshoresa. Panzvimbo iyoyo, yavo isingasviki, isina kunyorwa-yakatumirwa mbiru inovimbisa mhedzisiro sekusanganisa hypergolic zvinwiwa mune roketi injini.
Kupesana, tarisa maitiro emusikana wenhau wechidiki akabata kupfura kwake mwedzi wapfuura kuchiteshi cheTV cheNorth Dakota, achitevera ake-mami-F-bhomba paakakwira pamhepo kekutanga (uye kekupedzisira) nguva. Mushure mezvo, haana kuyedza kupomera chero munhu asi iye, akange asina hutsinye kunhepfenyuro yekumudzinga basa, uye nekuzvininipisa akabvuma epic yake KUKUNDA uye akazviseka ega nezvazvo.
Nekuda kweizvozvo, veruzhinji vaimuona semurume mudiki, anodiwa mukomana akaita akatendeseka flub. Vanhu vazhinji vakatsamwiswa nekupfura kwake pane kumhura kwake kwepamhepo.
Iye murume anozoita rebound oita mushe.
Asi Amy's Baking Kambani? Handina chokwadi nazvo. Ivo vangangodaro vanakidzwe neiyo pfupi uptick mubhizinesi kubva kune vanoda kuziva-vanotsvaga. Vamwe veavo vanhu vangatomboedza kukwenya varidzi mukukonana kana kudzingwa. Asi zviri kusahadzika ivo vanozoona yakawanda yekudzokorora bhizinesi kana chigadzirwa chavo chekudya chiri chepakati uye chakanyanyisa mutengo, uye ivo vachipa sevhisi neiyo snarl.
Asi chiratidzo chakanyanya kupokana nekubudirira kwavo mune ramangwana ndechekuti hunhu, hunhu husina kumira zvakanaka hwavanoratidza kune vanotsoropodza uye vashandi vangangopararira mukubata kwavo nevatengesi, vemabhangi, pamwe nenharaunda yakapoteredzwa - muchidimbu, chero munhu uye munhu wese ane ruoko mukuzvichengeta. bhizinesi richiyerera.
May 15, 2013 pa 11: 18 PM
Pfungwa yangu ndeyechokwadi kwete yekuregerera maitiro avo. Ndiri kungopokana nekukanganisa kusingaperi kwaachave nako pabhizimusi ravo. Kufanotaura kwangu ndekwekuti bhizinesi richange richishamisa… kwechinguva. -
May 16, 2013 pa 10: 12 AM
Ndinofunga mese mese mese, Douglas. Bhizinesi rinotora kwechinguva, asi Facebook Anofarira uye webhusaiti kurova hazvireve zvakanyanya kune bhizimusi renguva refu mumamiriro ezvinhu akadai. Vanogona here kutenderedza izvi kuita chinhu chakanaka gare gare mumugwagwa? Ndizvozvo. Kana izvi zvikazove zvechokwadi, bhizinesi ravo razvino richabudirira here? Pamwe kwete pasina chikuru rebranding.
Zvino, ivo vari kuti ivo vakabiwa; saka kana zvanga zviri izvo, uye ivo vari chaizvo vane hunyanzvi mauto, izvi zvinogona kuvaitira zvakanaka.
May 19, 2013 pa 7: 50 PM
Bhizinesi harisi kusimudza zvachose. Vakavharwa kwenguva pfupi.
Vanga vachiwana ongororo dzinotyisa paYelp kwemakore maviri apfuura nekutuka nekutuka vatengi vakanyunyuta kana vawana chikafu chakaipa kana kunonoka kuita basa.
Vakataura vachidada neRamseys show kuitira kuti agone 'kuudza nyika kunaka kwechikafu chavo.' Ini ndinofunga ivo vaifunga kuti achazopedzisira amira pamusoro pavo.
Wakatarisa here chikamu, kanenge maminetsi mashanu ekutanga? Aya haasi maviri varombo vemaresitorendi varidzi, iwo akachena uye akapusa nzungu.
May 20, 2013 pa 5: 54 AM
Chinhu ndechekuti, chikonzero ichi chese chakavhuvhuta munzvimbo yekutanga ndechekuti zvese chikafu nebasa zvaityisa. Iyi haisi yemagariro midhiya moto, iyi ikambani isinganunure chigadzirwa chemhando yepamusoro. Panzvimbo pekushanda pane izvo zvinhu zvavakadaidza muRamsay kuitira kuti abvise vatsoropodzi kumusana kwavo. Izvo zvese zvaive zvine mbiri kuzvitutumadza uye kushandisa.
Izvi zvaisave neimwe nzira zvakatangwa nemagariro enhau trolls. Izvi zvakatangwa nevaridzi. Kufanotaura kwangu ndekwekuti kufanotaura kwako kupora hakuzobudi. 🙂
May 20, 2013 pa 9: 13 AM
Sezvo mamwe emamwe makomendi akacherekedza, dai iwe wainyatso tarisa episode, iwe waizoziva kuti Amy naSammy Bouzaglo havazi ivo vakawirwa nemamiriro ezvinhu. Asi, ndivo vatengi nevashandi vakabatwa zvisina kunaka. Kushandira chikafu chakaomeswa chinotengeswa sechitsva pamutengo wepamusoro? Bhizinesi rakaipa. Kushungurudza vatengi zvese neshoko uye nemuviri kunyunyuta kana kutumira chikafu kumashure? Bhizinesi rakaipa. Kutora matipi evashandi usina kuzivisa vatengi? Bhizinesi rakaipa. Uye mhinduro dzevaridzi kuzvichemo uye kuongororwa kwakashata vanozvitaurira. Ivo vange vachiba zvakare mapikicha kubva kune mamwe maresitorendi uye vachizviisa paFacebook yavo uye webhusaiti sechikafu chavo. Izvo zviri pachena kuba kwepfuma yezvivakwa. Mazhinji emabhizinesi avakabira mapikicha kubva pavakatumira pane yavo Facebook vachikumbira kuti mifananidzo ibviswe. Kunyangwe iyo PR femu yavakashandira yakataura mune imwe bvunzurudzo kuti bhizinesi rakanga risingagone kununurwa uye kuti zvirinani kuvhara izvozvi nekucheka kurasikirwa kwavo.
Ini handioni nzira yekuti vadzoke kubva kune izvi. Ruzivo rwakashata rwakabva muchikamu cheKN chaingova chete chidimbu chechando. Iyo yakakwira nhamba yevateveri veFacebook, uyezve yakazotevera iyo nhamba yekuchengeterwa yakachengeterwa ramangwana rekuvhurwa kwechiitiko ndivo kunyanya vanhu vari kutarisira kupunzika kwechitima kuti vatore kunyange messier. Kune kunyange change.org chikumbiro chiri kutenderera kutora iyo Dept. yeVashandi kuti iongorore kambani nekutora matipi evashandi. Iko kucherechedzwa kwakavawanisa zvakare mukurumbira wekukanganisa kwakapfuura: Amy Bouzaglo akabatwa nemhosva yekuba zvitupa makore apfuura paakaedza kuvhura mutsara wechikwereti neSSN yemumwe munhu.
Zvandinotarisira ndezvekuti ivo vachazogara vakavhurika kudzamara vamanikidzwa kufaira kubhuroka. Ivo vakasindimara zvakanyanya kuti vavhare nekuda kweiyo yakaipa yekudhinda, asi pakati pezvavari kubhadhara iyo PR yakasimba uye nhamba yematare edzimhosva yavanofungidzirwa kuti vanomisidzana ne internet trolls, mari yavanayo haisi kuzogara kwenguva refu.
May 20, 2013 pa 9: 21 AM
@ facebook-769091638: disqus Ndakaona chikamu chose nguva pfupi yadarika… zvinoita kunge kupunzika (sezvakanangana nemusoro we "Kitchen Nightmares" yemutambo), asi urikusvetukira pachikwata sevamwe vese vachitora "Reality TV ”episode seuchapupu hwakakwana. Pfungwa yakakosha yemhinduro yangu ndeyekuti iyo showo inongova humbowo hwekugadzirisa kukuru. Izvo zvinoshamisira ndezvekuti Ramsey akavhura iyo showa vachitaura zvakanyanya nezvezvinhu zvavo zvakabikwa (ivo bhekari) uye hutsanana hwekicheni.
Ini handisi kuregerera maitiro avo, kana mhinduro yavo. Pfungwa yangu ndeyekuti hatina firimu rakakosha svondo rese kuti riongorore zvakatungamira kune izvo zvikamu zvakagadziridzwa uye zvakapatsanurwa pamwechete kuwedzeredza mamiriro aya. Ini ndinofunga zvinosuwisa kuti vanhu vazhinji varikufara nekuparara kwevanhu ava. Zvinosuruvarisa, kana zvisiri kusuruvara, kupfuura kurapwa kwevanhu ava kwevamwe muchikamu. Sezvandakareva mune iyo posvo, dai ndakanga ndapomba mari yangu yehupenyu inodarika miriyoni yemadhora uye kambani yangu yakanga ichidzika mubhora remoto, handina chokwadi chekuti ndinenge ndichipindura zvakanaka, futi.
May 20, 2013 pa 11: 27 AM
Ichi ndicho chinyorwa chekutanga chandakaverenga icho chinonzwira tsitsi, kana zvirinani
chinangwa, maererano naAmy's Baking. Sa imgurian (reddit cousin), yelper uye fb muteveri waAmy's Baking, ini ndainyatsotaura kuti avo vanofarira
dzese dzaive chikamu che "chiitiko" chemagariro. Semuenzaniso, ini "ndinofarira" yako facebook netarisiro yekugamuchira mamwe mapenzi ekupenga ari kunakidza, uye iwe unosvika kuti upinde mune yangu nhau feed. Kana vachinge va "kufarirwa" vanogona kutaura chero chavanoda uye ini ndese nzeve (maziso mune ino kesi) kudzamara ndave kufinhwa navo. Ivo vanogona kutora kupunzika kwechitima uku voichinja kuita goridhe, asi vachadaro? Kashoma kwazvo. Kuburikidza nehunhu hunotyisa, ivo vawana pamusoro pe50k facebook inofarira mumazuva mashoma mashoma. Pandakavafarira, vaive muchikamu che5-10k. Izvi zvakavapa mukana wekuva muromo wemakomiki (wekunyepedzera huipi - ingo sarudza tarisiro nekuungudza) izvo zvinogona kushanduka kuita sosi yekusimbisa kutengesa kwepamhepo. Ben & Jerry vanoita ice cream yekukudza vanhu, kureva Stephen Colbert's Americone Dream. Ivo vanogona kugadzira madhiri ekuseka kana kupusa menyu menyu zvinhu uye kutumira mifananidzo. "Ann Coulter anoreva Taco Salad." Zvinhu zvakadaro zvaizoita kuti ndirambe ndakatarisa, asi iwe unofanirwa kutichengeta tichivaraidzwa nekuti tinokanganwa nekukurumidza. Ini ndinowanzo kanganwa izvo zvinoratidza zvandiri kutarisa panguva dzekutengesa. Kupunzika kwechitima chendaneti hakusi gomba, imanera. 😉
May 20, 2013 pa 11: 54 AM
Kwidziridzo: Anofarira: 96,231, uye kuverenga, gumi nyowani kubvira pandakatanga kunyora iyi yekuvandudza.
Zvinhu zvese zvinotyisa zvakabviswa pamadziro kunze kwekutumira kubva muna Gumiguru: “Tinoda kuvadaidza kuti 'Camel Toe Mafia' ingori boka revaPussies vanohwanda kuseri kwekombuta. Kana kushandira YELP ”
Zvinoita sekunge kurota kwangu kweiyo nyowani inoshanda comedic internet villain yapera nekukasira sekutanga kwayo. Nguva yekusafanana navo uye enda uchikambaira kudzokera kuColonel Meow. MEOW!